WARBAAHINTA MARAYKANKA OO XAQIIJISAY IN SARKAAL SARE OO MARAYKAN AH LAGU DILAY SOOMALI YA. – Shabakadda Amiirnuur
November 26, 2020 9:04 am by admin Views: 89
Wargeystay newyork times ee ka soo baxa Dalka Maraykanka aya daabacay in Sarkaal Maraykan ah si gaar ahna uga tirsanaa Saraakiisha Sirdoonka Dalkaas lagu dilay Gudaha Soomaaliya.
Ilaa iminka lama shaacin Magaca sarkaalkaan hase ahaatee waxaa la sheegayaa in gudaha Dalka Maraykanka loogu samey doono astaan lagu xasuusto iyadoo magaciis lagu qori doono.
Sarkaalkaan ayaa ka tirsanaa Ciidamada sida qaaska ah loogu xisaabtamo ee la yiraahdo Navy SEAL. Kuwaasoo fuliya howlgalada qaaska ah gaar ahaan Marka la weerarayo Mujaahidiinta laga cabsi cabo ina y Xirfad iyo Tabbar sare oo xaga dagaalka ah leeyihiin.
Sarkaal diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado oo la hadlay wargeyska New York times ayaa shaaca ka qaaday in sarkaalka uu ahaa masuul sare oo katirsan CIA-da, laguna dilay howlgal ka dhacay Dalka Soomaaliya.
Toobaadyo ka hor ayay ahayd Markii Xarakada Shbaabul Mujaahidiin sheegtay in Sarkaal Maraykan ah iyo afar ciidamada Soomaalida ah ee uu ku shaqeyso ka mid ah ay dishay qarax ka dhacay Deegaanka Gendershe ee Duleedka Magaalada Marka ee Gobalka Shabeelaha hoose.
Waxay intaas Xarakadu Xiligaa ku dartay in ay sarkaal kale ee Maraykan ah dhaawacday.
“Camaliyad istish-haadi ah oo Mujaahidiintu ay Ciidamo Saliibiyiin iyo Murtadiin ah kula beegsadeen =deegaanka Gendershe ayay ku dileen Askari Maraykan ah iyo 4 katirsan Maleeshiyaadka Alpha Group” ayaa lagu yiri War xiligaas ka soo baxayaXarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Qaraxa Nafhurnimo ee ka dhanka ahaa Saraakiisha Marayakanka iyo saaxiibadooda u daacadda ah waxa u yimid Markii Ciidamada la dhibaateeyay duulaan ku soo galeen Gendershe.
Wax yar kadib Alshabaab ayaa deegaanka dib ula wareegtay waxayna soo bandhigtay sawiro Muujinaya Qalab Ciidan iyo mid caafimaad iyo lugaha askar Soomaali ah oo Meesha looga tegay kadib markii askartii ay ku yiileen qaraxa ku dhinteen.
Warbaahinta Maraykanku waxay sheegayaa in Sarkaalkaanu u dhintay dhaawac soo gaaray waxayna u badan tahay in uu yahay kii bayaanka Alshabab soo saartay lagu xusay ee Markii qaraxu dhacay kadib dhaawaca lagu qaaday.
haddii ay saas tahay askarta Maryakanka uga dhimatay weerarkii Deegaanka Gendershe waxay noqoneysaa laba laakiin haddii kii dhaawaca ahaa nool yahay oo askeriga imika Geeridiisa la shaaciyay yahay kii Alshabaab sheegtay in uu dhintay waxay dhimashada gendershe ee Maraykanka noqoneysaa hal askeri.